Kooxda Barcelona waxay 3-0 uga badisay naadiga Eibar. Goolasha laba ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay Luis Suares, halka goolka sadexaad uu dhaliyay Messi.
Guusha ay Barcelona gaartay ka sokoow, wuxuu kulanki xalay qiimo gaar ah u lahaa ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaliyay goolkiisii 400-aad ee uu ka dhaliyo horyaalka La Liga. Wuxuuna sidaasi ku noqday ciyaaryahanki ugu horreeyay taariikhda horyaalka kubadda cagta Spain ee dhaliya 400 oo gool.
Messi, horraantii xilli ciyaareedkaan ayaa laga dhigay kabtanka kooxda Barca oo uu marki ugu horreysay u saftay sannadki 2004-ti. Tan iyo xiligaas wuxuu dheelay 435 kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga.
Kooxda Real Madrid ayaa soo hoysay guusheedii ugu horreysay ee sanadkaan 201-ka, kaddib marki ay si dirqi ah uga badisay Real Betis xalay.
Real oo ay dhaawac uga maqnaayeen laacibiinteeda kala ah Gareth Bale, Marco Asensio, Thibaut Courtois iyo Toni Kroos, ayaa goolasha waxaa u kala dhaliyay Luca Modric iyo Dani Ceballos oo badal kusoo galay.
Kooxda ay Real isku magaalada yihiin ee Atletico Madir ayaa xajisatay kaalinta labaad ee dhinaca kala horeynta horyaalka kadib marki ay 1-0 ku martay kooxda Levante.
Goolka kaliyah ee ay ku badisay Atletico waxaa dhaliyay laacibka reer France Antoine Griezmann daqiiqadii 57-aad ee ciyaarta kadib marki uu gool u badalay rigoore loo dhigay.
Waa kulanki shanaad oo xiriir ah oo uu Giezmann gool dhalinayo.
Ciyaarihi kale ee horyaalka Spain, kooxda kaalinta sadexaad ku jirta ee Sevilla waxay guuldarro kala soo laabatay magaalo xeebeedka Bilbao ee waqooyiga Spain, kadib marki ay 2-0 kusoo dharbaaxday kooxda Atletic Bilbao.
Villa Real waxay 2-1 ku khasaartay kooxda Getafe. Halka Valencia iyo Real Valodolid ay ku kala baxeen bareejo 1-1 ah.
Dhanka kala horeynta waxaa horyaalka hogaamineysa Barcelona oo leh 43 dhibcood, waxaa ku xigta Athletico Madrid oo leh 38 dhibcid, kaalinta sadexaad waxaa ku jirta Sevilla oo leh 33 dhibic, Real ayaa lasoo sinantay kooxda Sevilla dhinaca dhibcaha, balse farqiga goolasha dartood ayay ku jirtaa kaalinta afraad.